အမေရိကန် NFPဒေတာ, ပျမ်းမျှလုပ်ခလစာရရှိမှုနှုန်းထား နှင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဒေတာ
စက်တင်ဘာလကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမေရိကန်အလုပ်သမားဈေးကွက်ဒေတာ ၃ခုစလုံးသည် ဈေးကွက်ခန့်မှန်းထားခဲ့သည်ထက် လျော့ကျခဲ့ပါသည်. လုပ်ခလစာတိုးတက်မှုနှုန်းမှာ ၀. ၃%မှ ၀. ၁%, NFPဒေတာမှာ မျှော်မှန်းနှုန်းထား ၁၈၀၀၀၀၏ အောက်ထစ် ၁၅၆၀၀၀ အထိသာရှိခဲ့ပြီး, အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၄. ၃%မှ ၄. ၄%အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်.
ထို့ကြောင့်ဈေးကွက်က ယခုထွက်ရှိမည့်ဒေတာကို ဆက်ပြီးကျမလား အခြေအနေပြန်ကောင်းလာမလားဆိုတာကို စိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. ယခုထွက်ရှိမည့်ဒေတာသည် ဈေးကွက်က စိတ်ပျက်ဖွယ် ကျဆင်းခဲ့ပါက အားမကောင်းခဲ့ပါက USDတန်ဖိုး သိသိသာသာကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်. ဒေတာအားကောင်းခဲ့ပါက USDဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်.
ဒေတာကို အောက်တိုဘာ ၆ရက် ၁၅:၃၀ MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်.
19.09.2017 07:43 အ​မေရိကန်​ ဗဟိုဘဏ်​ အစည်းအ​ဝေးပွဲ နှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
20.09.2018 11:41 ကနေဒါစီးပွားရေး ဒေတာအပေါ် ရောင်းဝယ်ပါ
ကနေဒါဒေါ်လာသည် အဆင့်ကောင်းကောင်းတွင် ဆက်လက်ရောင်းဝယ်ရန် အခွင့်အရေးများရှိပါသည်။ ကနေဒါဘဏ်၏ မကြာသေးမီက